7.12.2016 | ဂျာနယ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် သတင်းများ
မသန်ပေမယ့် စွမ်းသူများ၏ အံသြဖွယ်စွမ်းဆောင်မှုနှင့် အနုပညာစွမ်းရည်များ ဖော်ထုတ်ပြသမည့် “တတိယအကြိမ်မြောက် အနဂ္ဂရောင်စဉ်မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ...
6.12.2016 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ရုတ်တရက်မေ့လဲခြင်းဆိုတာ သွေးပေါင်နဲ့ သွေးခုန်နှုန်းကျသွားတဲ့အတွက် ဦးနှောက်မှာ အောက်ဆီဂျင် နဲ့သွေးထောက်ပံ့မှု ရုတ်တရက်ပြတ်တောက်သွားခြင်းကြောင...
6.12.2016 | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
1. ဆံသားတွေကို သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။
ဆံပင်တွေမှာ အဆီတွေထွက်နေရင် ပါးတယ်လို့ပိုပြီးထင်ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခေါင်းပုံမှန်လ...
အလှအပရေးရာအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ
1. ချင်း (ဂျင်း)
ချင်းမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အတွက် အသားအရည်ညစ်ခြင်း၊ အရေးအကြောင်းများ...
5.12.2016 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
သိုင်းရွိုက််က ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္႑ကပါဝင်တဲ့အတွက် သိုင်းရွိုက်ရောဂါ၊ သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာနဲ့ အခြားသိုင်းရွိုက်ပြဿနာတွေကိုရှောင်ရ...
ဆယ်ကျော်သက်နှင့် စိတ်ဖိစီးခြင်း (ဆယ်ကျော်သက်တို့ သိစေဖို့၊ အပိုင်း 2)
5.12.2016 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ဒီတစ်ပတ်အတွက် "ဆယ်ကျော်သက်တို့ သိစေဖို့" အစီအစဉ်ရဲ့ အပိုင်း-2မှာတော့ ဆယ်ကျော်သက်တွေ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုအကြောင်းကို သားဖွားနှင့်မီးယပ်...
မှတ်ဉာဏ်ပြန်ကောင်းစေမည့် အချက် 8 ချက်
5.12.2016 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
1. သကြားဓာတ်နည်းသော အစားအစာများစားသုံးပါ။
2. Omega-3 ပါ၀င်သည့်ငါးများကို စားသုံးပါ။
5.12.2016 | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
3. ဘူးဖေးတွေမှာ အလွန်အကျွံမစားပါနဲ့။